ဗိုလ်စွဲဖို့ ရေပန်းစားနေတဲ့ ပြင်သစ်နဲ့ ဘရာဇီးလ် နောက်တစ်ဆင့် တက်နိုင်မလား
6 Jul 2018 . 12:38 PM
အရှိန်ပြင်းပြင်းစီးဆင်းနေတဲ့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲတွေက ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်ကို ရောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့် ပိုပြီး ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနေပါပြီ။ ဒီနေ့(သောကြာ)မှာ စတင်ကစားမယ့် ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲတွေမှာ ဗိုလ်စွဲဖို့ ရေပန်းစားနေတဲ့ ပြင်သစ်၊ ဘရာဇီးလ်အသင်းတို့ဟာ ဥရုဂွေး၊ ဘယ်လ်ဂျီယံတို့နဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တာကြောင့် ဆီမီးဖိုင်နယ်ရောက်ဖို့ ရုန်းကန်ရမယ့်အနေအထားပါ။ ဘယ်အသင်း ဆီမီးဖိုင်နယ် တက်ခွင့်ရမလဲဆိုတာတော့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါပြီ . . .
ဥရုဂွေး နှင့် ပြင်သစ် (၆-၇-၂၀၁၈ ည ၈း၃၀)
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ ပထမဆုံးချန်ပီယံ ဥရုဂွေးနဲ့ ချန်ပီယံဟောင်း ပြင်သစ်အသင်းတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့ပွဲက အကြိတ်အနယ်ရှိမှာ အသေအချာပါပဲ။ လူငယ်တွေ အများစုကို အခြေခံထားတဲ့ ပြင်သစ်အသင်းရဲ့ ခြေစွမ်းက အားရစရာအနေအထားရှိနေပြီး ”ပီလီ လက်သစ်”လို့ တင်စားခံထားရတဲ့ လူငယ်ကြယ်ပွင့်တိုက်စစ်ကစားသမား ဘာပေ Mbappe ကလည်း ခြေစွမ်းပြ ဂိုးတွေသွင်းနေတယ်။ ကွင်းလယ်နဲ့ တိုက်စစ်မှာလည်း World Class Players တွေ ရှိနေတာကြောင့် အားရစရာကောင်းပါတယ်။ ဥရုဂွေးအသင်းမှာ ဆွာရက်ဇ် Suarez ၊ ဂိုဒင် Godin ၊ ကာဆာရက်စ် Cáceres စတဲ့ ၀ါရင့်ကစားသမားတွေအပြင် ဘန်တန်ကော် Bentancur ၊ တော်ရဲရား Torreira တို့လို လူငယ်ခြေတက်ကစားသမားတွေရှိနေတယ်။ ဥရုဂွေးအတွက် ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်လာနိုင်တာက အဓိက တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကာဗာနီ Cavani ဒဏ်ရာကြောင့် ဒီပွဲမှာ ပါဝင်ဖို့ မသေချာတာပါပဲ။ သူမပါနိုင်ရင် ဥရုဂွေးတိုက်စစ်မှာ ဆွာရက်ဇ် တစ်ယောက်တည်း ရုန်းကန်ရဖို့ရှိနေတယ်။ ဒီနှစ်သင်းဟာ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက် ၁၉၆၆၊ ၂၀၀၂၊ ၂၀၁၀ ပြိုင်ပွဲတွေတုန်းက အုပ်စုအဆင့်မှာ ဆုံတွေ့ခဲ့ဖူးပြီး ဥရုဂွေးက နှစ်ပွဲသရေ၊ တစ်ပွဲသရေနဲ့ ရှုံးပွဲမရှိခဲ့ဘူး။ သမိုင်းတစ်လျှောက် ဆုံတွေ့မှုမှာလည်း (၇)ကြိမ်မှာ ဥရုဂွေးက (၂)ပွဲနိုင်၊ ပြင်သစ်က (၁)ပွဲနိုင် (၄)ပွဲသရေကျခဲ့တယ်။ ဥရုဂွေးအသင်းဟာ ၁၉၈၅ တုန်းက ခြေစမ်းပွဲမှာ ပြင်သစ်ကို (၂-၀)ဂိုးနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း (၅)ပွဲဆက်တိုက် ရှုံးပွဲမရှိခဲ့ဘူး။ သေချာတာကတော့ ဥရုဂွေးကို ပြင်သစ် လွယ်လွယ်ကူကူကျော်ဖြတ်နိုင်မှာ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ မိနစ်(၉၀)အတွင်း အဖြေပေါ်ဖို့ မလွယ်ဘဲ ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်။ နောက်တစ်ဆင့်တက်မယ့်အသင်းဆိုရင်တော့ ပြင်သစ်အသင်းကိုပဲ အရဲစွန့် ရွေးချင်ပါတယ်။
ဘရာဇီးလ် နှင့် ဘယ်လ်ဂျီယံ (၇-၆-၂၀၁၈ နံနက် ၁၂း၃၀)
အခု ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲဖို့ ရေပန်းစားနေတဲ့နှစ်သင်း ကွာတားဖိုင်နယ်မှာ စောစာစီးစီး ဆုံတွေ့နေတာကြောင့် နစ်နာတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ နှစ်သင်းစလုံးမှာလည်း ကမ္ဘာ့အဆင့်ကစားသမားတွေ စုဝေးနေတာကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ပရိသတ်တွေ အားလုံး ဒီပွဲကို စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ ဘရာဇီးလ်နဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းတို့ဟာ ၂၀၀၂ ကမ္ဘာ့ဖလား ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်တုန်းက တွေ့ဆုံခဲ့ဖူးပြီး ဂန္ထ၀င်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ရီဗယ်လ်ဒို Rivaldo ၊ ရော်နယ်လ်ဒို Ronaldo တို့ရဲ့သွင်းဂိုးတွေနဲ့ ဘရာဇီးလ်က အနိုင်ရခဲ့တယ်။ သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ (၄)ကြိမ်ဆုံတွေ့ဖူးပြီး ဘရာဇီးလ်က ၁၉၆၃ ခြေစမ်းပွဲတစ်ကြိမ်သာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့သလို ကျန်တဲ့ပွဲတိုင်း အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ တိုက်စစ်အားသန်နှစ်သင်းဖြစ်တာကြောင့် အပြန်အလှန်သွင်းဂိုးတွေကို မြင်တွေ့ရဖို့ရှိနေပြီး နှစ်သင်းစလုံးမှာ ပွဲအဖြေကို ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ကစားသမားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြတာပါ။ ကွာတားဖိုင်နယ်လာရာ လမ်းကြောင်းမှာ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းက အင်္ဂလန်ကလွဲပြီး အသင်းကြီးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာ မရှိပေမယ့် ဘရာဇီးလ်အသင်းကတော့ ခြေစွမ်းမာကျောတဲ့အသင်းတွေကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲကြီးအတွေ့အကြုံရင့်ကစားသမား ပိုများတဲ့ ဘရာဇီးလ်အသင်း ဘယ်လ်ဂျီယံကို ခက်ခက်ခဲခဲကစားပြီးမှ ဆီမီးဖိုင်နယ်တက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဗိုလျစှဲဖို့ ရပေနျးစားနတေဲ့ ပွငျသဈနဲ့ ဘရာဇီးလျ နောကျတဈဆငျ့ တကျနိုငျမလား
အရှိနျပွငျးပွငျးစီးဆငျးနတေဲ့ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပှဲတှကေ ကှာတားဖိုငျနယျအဆငျ့ကို ရောကျနပွေီဖွဈတာကွောငျ့ ပိုပွီး ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားစရာကောငျးနပေါပွီ။ ဒီနေ့(သောကွာ)မှာ စတငျကစားမယျ့ ကှာတားဖိုငျနယျပှဲတှမှော ဗိုလျစှဲဖို့ ရပေနျးစားနတေဲ့ ပွငျသဈ၊ ဘရာဇီးလျအသငျးတို့ဟာ ဥရုဂှေး၊ ဘယျလျဂြီယံတို့နဲ့ ရငျဆိုငျရမှာဖွဈတာကွောငျ့ ဆီမီးဖိုငျနယျရောကျဖို့ ရုနျးကနျရမယျ့အနအေထားပါ။ ဘယျအသငျး ဆီမီးဖိုငျနယျ တကျခှငျ့ရမလဲဆိုတာတော့ စိတျဝငျစားစရာကောငျးနပေါပွီ . . .
ဥရုဂှေး နှငျ့ ပွငျသဈ (၆-၇-၂၀၁၈ ည ၈း၃၀)
ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲရဲ့ ပထမဆုံးခနျြပီယံ ဥရုဂှေးနဲ့ ခနျြပီယံဟောငျး ပွငျသဈအသငျးတို့ ထိပျတိုကျတှတေဲ့ပှဲက အကွိတျအနယျရှိမှာ အသအေခြာပါပဲ။ လူငယျတှေ အမြားစုကို အခွခေံထားတဲ့ ပွငျသဈအသငျးရဲ့ ခွစှေမျးက အားရစရာအနအေထားရှိနပွေီး ”ပီလီ လကျသဈ”လို့ တငျစားခံထားရတဲ့ လူငယျကွယျပှငျ့တိုကျစဈကစားသမား ဘာပေ Mbappe ကလညျး ခွစှေမျးပွ ဂိုးတှသှေငျးနတေယျ။ ကှငျးလယျနဲ့ တိုကျစဈမှာလညျး World Class Players တှေ ရှိနတောကွောငျ့ အားရစရာကောငျးပါတယျ။ ဥရုဂှေးအသငျးမှာ ဆှာရကျဇျ Suarez ၊ ဂိုဒငျ Godin ၊ ကာဆာရကျဈ Cáceres စတဲ့ ဝါရငျ့ကစားသမားတှအေပွငျ ဘနျတနျကျော Bentancur ၊ တျောရဲရား Torreira တို့လို လူငယျခွတေကျကစားသမားတှရှေိနတေယျ။ ဥရုဂှေးအတှကျ ထိုးနှကျခကျြဖွဈလာနိုငျတာက အဓိက တိုကျစဈမှူးတဈဦးဖွဈတဲ့ ကာဗာနီ Cavani ဒဏျရာကွောငျ့ ဒီပှဲမှာ ပါဝငျဖို့ မသခြောတာပါပဲ။ သူမပါနိုငျရငျ ဥရုဂှေးတိုကျစဈမှာ ဆှာရကျဇျ တဈယောကျတညျး ရုနျးကနျရဖို့ရှိနတေယျ။ ဒီနှဈသငျးဟာ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲတဈလြှောကျ ၁၉၆၆၊ ၂၀၀၂၊ ၂၀၁၀ ပွိုငျပှဲတှတေုနျးက အုပျစုအဆငျ့မှာ ဆုံတှခေဲ့ဖူးပွီး ဥရုဂှေးက နှဈပှဲသရေ၊ တဈပှဲသရနေဲ့ ရှုံးပှဲမရှိခဲ့ဘူး။ သမိုငျးတဈလြှောကျ ဆုံတှမှေု့မှာလညျး (၇)ကွိမျမှာ ဥရုဂှေးက (၂)ပှဲနိုငျ၊ ပွငျသဈက (၁)ပှဲနိုငျ (၄)ပှဲသရကေခြဲ့တယျ။ ဥရုဂှေးအသငျးဟာ ၁၉၈၅ တုနျးက ခွစေမျးပှဲမှာ ပွငျသဈကို (၂-ဝ)ဂိုးနဲ့ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး (၅)ပှဲဆကျတိုကျ ရှုံးပှဲမရှိခဲ့ဘူး။ သခြောတာကတော့ ဥရုဂှေးကို ပွငျသဈ လှယျလှယျကူကူကြျောဖွတျနိုငျမှာ မဟုတျလောကျပါဘူး။ မိနဈ(၉၀)အတှငျး အဖွပေျေါဖို့ မလှယျဘဲ ပယျနယျတီအဆုံးအဖွတျအထိရောကျသှားနိုငျတယျ။ နောကျတဈဆငျ့တကျမယျ့အသငျးဆိုရငျတော့ ပွငျသဈအသငျးကိုပဲ အရဲစှနျ့ ရှေးခငျြပါတယျ။
ဘရာဇီးလျ နှငျ့ ဘယျလျဂြီယံ (၇-၆-၂၀၁၈ နံနကျ ၁၂း၃၀)
အခု ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ဗိုလျစှဲဖို့ ရပေနျးစားနတေဲ့နှဈသငျး ကှာတားဖိုငျနယျမှာ စောစာစီးစီး ဆုံတှနေ့တောကွောငျ့ နဈနာတယျလို့ ဆိုရမယျ။ နှဈသငျးစလုံးမှာလညျး ကမ်ဘာ့အဆငျ့ကစားသမားတှေ စုဝေးနတောကွောငျ့ ကမ်ဘာတဈဝှမျးက ပရိသတျတှေ အားလုံး ဒီပှဲကို စိတျဝငျတစားစောငျ့ကွညျ့နကွေတယျ။ ဘရာဇီးလျနဲ့ ဘယျလျဂြီယံအသငျးတို့ဟာ ၂၀၀၂ ကမ်ဘာ့ဖလား ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့တုနျးက တှဆေုံ့ခဲ့ဖူးပွီး ဂန်ထဝငျကွီးတှဖွေဈတဲ့ ရီဗယျလျဒို Rivaldo ၊ ရျောနယျလျဒို Ronaldo တို့ရဲ့သှငျးဂိုးတှနေဲ့ ဘရာဇီးလျက အနိုငျရခဲ့တယျ။ သမိုငျးတဈလြှောကျမှာ (၄)ကွိမျဆုံတှဖေူ့းပွီး ဘရာဇီးလျက ၁၉၆၃ ခွစေမျးပှဲတဈကွိမျသာ ရှုံးနိမျ့ခဲ့သလို ကနျြတဲ့ပှဲတိုငျး အနိုငျရခဲ့ပါတယျ။ တိုကျစဈအားသနျနှဈသငျးဖွဈတာကွောငျ့ အပွနျအလှနျသှငျးဂိုးတှကေို မွငျတှရေ့ဖို့ရှိနပွေီး နှဈသငျးစလုံးမှာ ပှဲအဖွကေို ပွောငျးလဲနိုငျစှမျးရှိတဲ့ ကစားသမားတှကေို ပိုငျဆိုငျထားကွတာပါ။ ကှာတားဖိုငျနယျလာရာ လမျးကွောငျးမှာ ဘယျလျဂြီယံအသငျးက အင်ျဂလနျကလှဲပွီး အသငျးကွီးတှနေဲ့ ရငျဆိုငျခဲ့ရတာ မရှိပမေယျ့ ဘရာဇီးလျအသငျးကတော့ ခွစှေမျးမာကြောတဲ့အသငျးတှကေို ရငျဆိုငျကြျောဖွတျခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။ ပွိုငျပှဲကွီးအတှအေ့ကွုံရငျ့ကစားသမား ပိုမြားတဲ့ ဘရာဇီးလျအသငျး ဘယျလျဂြီယံကို ခကျခကျခဲခဲကစားပွီးမှ ဆီမီးဖိုငျနယျတကျနိုငျပါလိမျ့မယျ။